Umxube weKhitshi oMtshatayo oMlingani oMnyama kuMpetha kaMnyama
I-SKU: 2310301B iindidi: IFaucets yasekhitshini, Thatha iipompu zekhitshi tags: Ikhitshi lokuKhangela ekhitshini, I-Brass eqinileyo, ISpivel Spout
Kumnandi nje! Ndiyamthanda umnyama omnyama ujongeka umhle kunye nekhawuntala yethu ephezulu. Imiyalelo yofakelo yayineefoto zombala ezenza kube lula ukuyiqonda. Andizange ndiyifake itompu kodwa andabinangxaki, akukho kuvuza! Umyeni wam wamangaliswa kakhulu kukuba andinakuyenza ngaphandle koncedo.
Amanzi aphuma ngokukhawuleza okukhulu. Intloko ebuyisekayo isebenza kakuhle kangangokuba andikholelwa ukuba ndilinde ixesha elide ukubuyisela itompu esele ikho.
Ixabiso lalimangalisa. Awuyi kuba lusizi ngokuthenga !!
Ndonwabe kakhulu yile faucet ndicinga ukuba ibifikeleleka kangakanani. Ukufakwa kwakulula kakhulu kwaye itepu yeza nayo yonke into efunekayo kufakelo. kukho umbhobho olungileyo wobude wokutshiza kwaye ubunzima bugcina busendaweni ngokufanelekileyo. Kuya kuba kuhle ukuba bekukho umazibuthe phakathi kwesitshizi kunye nomzimba wompompo kodwa uhlala endaweni nokuba urhoxisiwe. Ndingacebisa oku kumhlobo.
Ndiyayithanda uthando le faucet! Kwakulula kakhulu ukuyifaka, yathatha kuphela malunga nemizuzu emi-5 ndakuba ndiyisusile itepu endala. Elona candelo linzima ekufakweni kukususwa kwangaphambilini. Imikhombandlela yayicacile, ndathanda ukuba inomfanekiso wenyathelo ngalinye. Ikhitshi lam lahlaziywa kwangoko kwaye ndonwabile kakhulu ngale nto ndiyithengileyo! Ibifikeleleka kakhulu, ibonakala ikumgangatho, ndiyakuthanda ukugqitywa kwe-matte. Lumka, iminwe iyabonakala ngakumbi kodwa icinywe ngokulula. Yeza yafakwa kakuhle kwaye ngaphambili kunokuba bekulindelwe. Akukho nto imbi ukuyithetha ngale mveliso, sendicebisile ukuba abanye babini kwaye bobabini bayithengile.